Ngithola iphutha elithi "Out of memory" lapho ngilungisa i-PST /OST ifayela. Okufanele ngikwenze? - DataNumen
Leli phutha lisho i-PST yakhoOST ifayela likhulu kakhulu futhi isikhala sememori kusistimu yakho asanele ukuba usithole. Ngokuvamile, leli phutha livela kumakhompyutha aphansi, kanye ne-PST /OST ifayela likhulu kuno-50GB.
Nazi ezinye izixazululo zephutha elithi "Out of memory":
Faka umkhiqizo wethu kwenye ikhompyutha ngokulungiswa okungcono kwehadiwe bese uyazama futhi. Kunconywa ukusebenzisa ikhompyutha engama-64bit enememori engaphezu kuka-64GB ne-64bit Outlook efakiwe ukwenza lo msebenzi. Nge-64bit Outlook, ungasebenzisa i-64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery ezosebenzisa ngokugcwele imemori kusistimu yakho.
Qiniseka ukuthi kunezikhala ezanele zama-disk ku-C: drive yakho. IWindows izosebenzisa izikhala zediski ku-C: drive njengememori ebonakalayo. Uma kungekho izikhala ezanele zama-disk ku-C: drive, lapho-ke nawe uzohlangabezana nenkinga enjalo. Kunconywa ukugcina okungenani i-100GB izikhala zediski yamahhala ku-C: drive yakho.
Noma ungasebenzisa DataNumen File Splitter ukuhlukanisa i-PST /OST fayila izingcezu eziningana, ngayinye ngosayizi ongaba ngu-10GB. Bese ugijima DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery ukulungisa lezi PST /OST amafayela ngamunye ngamunye noma ngeqoqwana ngomsebenzi "Wokulungisa Iqoqo". Kodwa-ke, ngalesi sixazululo, ungalahlekelwa yimininingwane ethile lapho uhlukanisa i-PST /OST file namanye ama-imeyili asemngceleni wefayela, kepha ungavimbela iphutha elithi “Out of memory” livele bese uthola i-most kwedatha.
64bit, DataNumen File Splitter, izikhala zamahhala, Ngaphandle kwememori, Hlukanisa